Wararka Suuqa Maanta: PSG oo bartilmaameyd ka dhiganeysa labo Xidig, Heshiiska Ansu Fati iyo Qodobo kale | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: PSG oo bartilmaameyd ka dhiganeysa labo Xidig, Heshiiska Ansu...
Barcelona uma badna inay raacdo u gasho Manchester United xidigeeda Paul Pogba marka heshiiska ciyaaryahanka khadka dhexe ee France uu dhamaado xagaaga soo aadan madaama aysan awoodin mushaharka 28 jirka. ( AS)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea iyo England Ross Barkley, oo 27 jir ah, ayaa xiiseynaya Burnley iyagoo qorsheynaya suuqa kala iibsiga Janaayo. (Thesun)
Paris St-Germain ayaa bartilmaameedsan doonta midkood weeraryahanka Bayern Munich iyo Poland Robert Lewandowski, oo 33 jir ah, ama weeraryahanka Borussia Dortmund iyo Norway Erling Braut Haaland, oo 21 jir ah, sannadka 2022 si uu u noqdo bedelka weeraryahanka Faransiiska Kylian Mbappe. 22 jirkaan ayaa la filayaa inuu ku biiro Real Madrid. (Le 10 Sport)
Wadahadalka cusboonaysiinta qandaraaska ee weeraryahanka reer Spain Ansu Fati ayaa hakad ku yimid Barcelona iyadoo wakiilka 18 jirka Jorge Mendes uu doonayo labo sano oo heshiis ah wuxuuna diidan yahay 1bn euro (£ 844m). (El Nacional)
Agaasimaha ciyaaraha ee Liverpool Michael Edwards ayaa diirada u saaran Real Madrid si uu kooxda reer Spain uga caawiyo dhanka Suuqa. (thesun)
Tottenham Hotspur iyo Newcastle United ayaa bartilmaameedsanaya weeraryahanka Fiorentina iyo Serbia Dusan Vlahovic oo 21 jir ah (Sun)
Aston Villa ayaa isha ku heysa daafaca dambeedka bidix ee Bologna Aaron Hickey laakiin 19 jirka reer Scotland ee daafaca ah kuma degdego inuu ka tago Italy. (Thesun)
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaan la eryi doonin inkasta oo ciyaaryahanka reer Norway uu badiyay kaliya afar ka mid ah sideed kulan oo Premier League ah xilli ciyaareedkan. (Theathletic)
Previous articleHordhac: Arsenal Vs Crystal Palace ee Horyaalka Premier League-ga, Liiska Xidigaha Maqan iyo Shaxda Ciyaarta
Next articlePUNTLAND oo fashilisay qorshe uu deegaanadeeda ka waday taliye XIJAAR – Xog
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa xalay Muqdisho lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen inta badan siyaasiyiinta reer Muqdisho oo ay ugu horeeyaan golaha midowga...
Wararka Suuqa Maanta: Xantooda laga qoray Mbappe, Bale, Werner, Lacazette, Lingard,...